नेपाललाई ओलीको वचन : ‘महाधिवेशनपछि अध्यक्ष तपाई नै हो’
काठमाडौं, ४ वैशाख । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुई अध्यक्षबीच बराबरी हैसियतमा जिम्मेवारी लिने सहमति भयो । त्यही सहमतिअनुसार नै असोज १७ गते गरिएको सहमतिमा ओली र प्रचण्ड एकता संयोजन समितिको मूख्य नेतामा राखियो ।
बार्तामा ओलीले ‘अहिले एकता गरिहाल्यौं, एकतापछि तपाई हामी छँदै छौं नि । एकता मात्र हुन दिनुस्, महाधिवेशनमा अध्यक्ष तपाई नै हो’ भनेको माधव नेपालनिकट नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेका छन् ।
ओलीले एकता गरिहाल्यौ, त्यसपछि बहुमतको बलमा पेलौला भन्ने मानसिकता बोक्दा एकतामा समस्या आएको माओवादी नेताहरुको दावी छ । माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बाँडफाँड गर्ने सहमति लागू भएन । सहअध्यक्षमा जाने प्रस्ताव आयो । फेरि माधव नेपाललाई आश्वासन दिइएको छ । हामीले एमालेबाट कतिपटक धोका खानुपर्ने ? कति त्याग गर्नुपर्ने ? वचनको पक्का नभएसम्म एकता हुँदैन ।’ (उज्यालाे नेपाल)